Impahla Yendlu, Ibhola Elithungwe Ngesandla, Ukotini Odayisayo - UTianda
Ucingo: +86 13615410178
Sikhuthaza ugqozi lwasekhaya, sixhuma umsebenzi wobuciko wabadwebi nabadwebi kubantu nasezindaweni emhlabeni jikelele. Njengoba sinezitolo ezingaphezu kwezingu-100 kanye nabalingani bama-franchise emazweni ayi-9, siyindawo yamazwe omhlaba efenisha yangaleso sikhathi neyesimanje, izindlu zasendlini kanye nokuhlobisa okusiza abantu ukuba bamukele i-Welcome Life In. Izinhlobo zethu zokuphila zinikela ngokuphila okuphefumulelwe ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, imiklamo ekhethekile, kanye nesitayela esingapheli isikhathi - konke kunikwa amandla ngamadizayini wedijithali namathuluzi wokubona anikezela ngezixazululo zokuthenga ezingenamthungo esitolo naku-inthanethi.
Indlela engcono yokuthenga online ifenisha, imihlobiso yasekhaya nokunye okuningi! Sikhetha ngesandla futhi sikhethe okuhle ngekhwalithi nesitayela sakho nekhaya lakho. Kungani uchitha izinsuku ushayela kusuka esitolo ukugcina uzama ukuthola lokho kubukeka okuhle noma ucezu oluyingqayizivele. Thola konke okufunayo nokuningi kusuka kunethezekile lekhaya lakho. Ngobuhle obuhlukile bokwakha, imvelo yesitolo, kanye nomphakathi oku-inthanethi, sizibandakanya namakhasimende ethu ngemithombo yezokuxhumana, ukuthengwa kwamaselula, izinsizakalo zokwakha, ukubhaliswa kwezipho, nokuningi.
Umbhede waseYongsheng omnyama osayizi omkhulu omkhulu
U-Yongsheng usekhaya wonke umbhede wensimbi, omnyama
Yongsheng ekhaya isiguqo umbhede
Umbhede wombhede waseYongsheng, omnyama, umbhede ophindwe kabili
Isitolo esidayisa yonke impahla Usayizi 7 ngokwezifiso Outdoor eshibhile Inflatabl ...
Ezemidlalo Challenger Series Soccer Ball ngokwezifiso Shi ...
Usayizi 7 PU laminated Lesikhumba Basketball nge Cus ...
Usayizi 5 6 7 PU lesikhumba ngokwezifiso logo ngezifiso ba ...
usayizi we-basketball wenjoloba webhola basketball 13567 we-ou ...
Usayizi Official 7 ezishibhile ezimibalabala iraba basketbal ...
Brown Umbala PU PVC ngokwezifiso Ilogo Laminated Basket ...
Yikuphi ukuhlukaniswa kwezindwangu? Le nto ebizwa ngendwangu isho izinto zeshidi ezenziwe ngemicu yendwangu. Izindwangu ezijwayelekile zingahlukaniswa ngokusetshenziswa kwazo nezindlela zokukhiqiza. Ngokwenhloso ye-f ...
Yini i-textile science? Njengesayensi yezobuchwepheshe, izindwangu zifundisisa izindlela zomzimba (zomzimba, ezomshini) nezindlela zamakhemikhali ezisetshenziselwa ukuhlangana kwe-fiber nokusebenza. Abantu abazohlala, abokuqala ukudla, abesibili ukugqoka. Kusukela endulo ...
Yiziphi izinhlobo zezindwangu ezisetshenziselwa ifenisha? Ngokuya ngezindwangu ezehlukene, ifenisha ephakanyisiwe ingahlukaniswa ibe isikhumba, isikhumba sokufakelwa, indwangu, njll. Indwangu yefenisha yesikhumba ephakanyisiwe iyisikhumba sesilwane ...
Yikuphi ukuhlukaniswa kwezindwangu?
Yini i-textile science?
Yiziphi izinhlobo izindwangu asetshenziselwa fu ...